तीन स्टेडियममा हुँदैछन् आइपिएलका खेलहरु - News Bihani
मंगलवार, भाद्र १६ २०७७
काठमाडौं । १३औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा १९ सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुँदैछ । भारतमा कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणले गर्दा यस पटकको आइपिएल विदेशी जमिनमा आयोजना हुने भएको हो ।
आइपिएलका लागि टोलीमा संलग्न प्रायजसो टोलीका खेलाडी तथा स्टाफहरु युएई पुगिसकेका छन् । बाँकी खेलाडी क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेका छन् । उनीहरु पनि प्रतियोगिता सुरु हुन अघि टोलीमा आवद्ध हुन युएई पुग्नेछन् । त्यहाँ पुगेर गरिएको कोरोना परीक्षणमा चेन्नइका दुई खेलाडीसहित १३ जना सहयोगी कर्मचारीहरुमा संक्रमण देखिएको छ ।
१३औं संस्करणसम्म आइपुग्दा, मुम्बइ इन्डियन्सले (२०१३,२०१५,२०१७ र २०१९) चार पटक उपाधि जितेको छ । यस्तै, चेन्नाइ सुपर किङ्सले (२०१०, २०११ र २०१८) मा गरी तीन पटक जितेको छ । कोलकाता नाइट राइडर्सले २०१२ र २०१४ मा, राजस्थान रोयल्सले २००८, डेकन चाजर्सले २००९ र सनराइजर्स हैदरावादले २०१६ मा एक एक पटक आइपिएलको उपाधि जितेका छन्छ। किङ्स इलाभेन पञ्जाब, दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेञ्जर्स बेङ्लोरले अहिलेसम्म उपाधि हात पार्न सकेका छैनन्।
बन्द स्टेडियममा सञ्चालन गरिने आइपिएलमा ६० खेल हुनेछन् । आइपिएलका खेलहरु युएईको तीन वटा स्टेडियममा हुनेछ । युएईमा पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल) लगातार २०१६, २०१७, २०१८ र २०१९ को प्रतियोगिता सफल रुपामा आयोजना भइसकेको छ । दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह र शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबुधाबीमा आइपिएलका खेल हुनेछन् । आज यी तीन वटा स्टेडियमा बारेमा चर्चा गर्नेछौं ।
१. दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम
दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमलाई दुबई स्पोर्टर्स सिटी क्रिकेट स्टेडियमको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । बहुउद्देश्यीय रंगशालाको क्षमता २५ हजार रहेको छ । यस मैदानमा सन् २००९ मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलिएको थियो । यस्तै ७ मेमा पाकिस्तान र अष्ट्रेलियाले पहिलो टी-२० प्रतियोगिता खेलेका थिए । यस ग्राउण्डमा ६२ अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएको छ । जहाँ पहिले व्याटिङ गर्ने टोलीले ३४ तथा दोस्रो व्याटिङ गर्ने टोली २७ पटक विजयी भएको छ भने एउटा खेल बिना नतिजा बराबरीमा सकिएको छ । यस मैदानमा श्रीलंकाले सबैभन्दा उच्च योगफल बनाएको छ भने केन्याले सबैभन्दा कम स्कोर बनाएको छ । यस स्टेडियमको औषत रन १ सय ४५ रहेको छ ।
घरेलु टी-२० प्रतियोगिताको ६७ वटा खेल यस मैदानमा भएको छ । जसमध्ये पहिले व्याटिङ गर्ने टिमले २२ तथा लक्ष्य पच्छाउने टोलीले ४४ पटक जित हासिल गरेको छ भने एक खेल नतिजाविहिन टुंगिएको छ । पहिले व्याटिङ गर्ने टोलीको ३२.४ प्रतिशत र दोस्रो व्याटिङ गर्ने टिमको जित्ने सम्भावना ६६.२ प्रतिशत रहेको छ । यस मैदानमा लाहोर क्वालान्दर्सले २ सय १ रनको उच्च योगफल बनाएको छ ।
यस मैदानमा १ सय ५० रनभन्दा बढी ३० पटक, १ सय ५० देखि १ सय ६९ रनको बीचमा १९, १ सय ७० देखि १ सय ८९ रनको बीचमा १५ र १ सय ९० भन्दा माथि ३ पटक रन बनाएको छ । यस्तै, यस मैदानको पिच फास्ट बलरका लागि उपयुक्त रहेको छ ।
२. शारजाह क्रिकेट स्टेडियम
आइपिएल आयोजना हुने स्टेडियममध्ये शारजाह क्रिकेट स्टेडियम पनि एक हो । सन् १९८२ मा बनाइएको यस स्टेडियमको क्षमता १७ हजार रहेको छ । १९८४ मा पहिलो पटका एसिय कपको आयोजना भएको थियो । यस स्टेडियमलाई अफगानिस्तानले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट ग्राउण्ड बनाएको थियो ।
१९८४ मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट भएको थियो भने २०१३ मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० आयोजना भएको थियो । अहिलेसम्म यस मैदानमा २ सय ३२ एक दिवसीय, १४ टी-२० र ४४ घरेलु टी-२० का खेलहरु भएको छ । जसमा टी-२० मा ९ खेलमा पहिले व्याटिङ गर्ने टोली विजयी भएको छ भने ४ खेलमा लक्ष्य पच्छाउने टोलीले जित हात पारेको छ । यसैगरी, ४४ घरेलु टी-२० मा पहिले व्याटिङ गर्ने टिम १४ र दोस्रो व्याटिङ गर्ने टोली २९ पटक विजयी भएको छ । पहिले व्याटिङ गर्ने टोलीको ३१.१ प्रतिशत र दोस्रो व्याटिङ गर्ने टोलीको ६२.२ प्रतिशत रहेको छ ।
यस मैदनमा सबैभन्दा उच्च योगफल २ सय रन बनेको छ भने कम स्कोर ८२ रन रहेको छ । यहाँको औषत रन १ सय ५३ रहेको छ । विगत् ५ वर्षमा यस मैदानको औषत र २०१४ मा १५८.१, २०१६ मा १४९.१, २०१७ मा १५१.८, २०१८ मा १४५.५ र २०१९ मा १६१ रन रहेको छ ।
शारजाहको पिच स्पिनरका लागि सुहाउँदो रहेको छ । यहाँ लेग स्पिनरको औषत अन्य बलरहरुको तुलनामा सबैभन्दा राम्रो रहेको छ ।
३. शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम
युएईको शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम सबैभन्दा पछि स्थापना भएको मैदान हो । यस मैदानको क्षमता २० हजार रहेको छ । २००६ मा एकदिवसीय र २०१० मा टी-२० का खेल पहिलो पटक भएको थियो । ४५ एकदिवसीयमध्ये २९ खेलमा पहिले व्याटिङ गर्ने टोली विजयी भएको छ भने १६ खेलमा दोस्रो व्याटिङ गर्ने टोली विजयी भएको छ । यस्तै ४५ अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा २० खेलमा पहिले व्याटिङ र २५ खेलमा दोस्रो व्याटिङ गर्ने टोली विजयी भएको छ । यस मैदानमा आयरल्यान्डले २ सय २५ रनको उच्च योगफल बनाएको छ भने नाइजेरियाले सबैभन्दा कम ६६ रन बनाएको थियो ।
घरेलु लिगको ११ वटा खेलमात्र यस मैदानमा भएको छ । जसमा पहिले व्याटिङ गर्ने टिम ५ र दोस्रो व्याटिङ गर्ने टोली ६ खेलमा विजयी भएको छ । यस मैदनमा औषत १ सय ४७ रन बनेको छ । जसमा १ सय ५० मुनि ५, १ सय ५० देखि १ सय ६९ को बीचमा ३ र १ सय ७० देखि १ सय ८९ रन भित्र दुई पटक बनाएको छ । यस्तै १ सय ९० रन भन्दाबढी रन एक पटक बनाएको छ । जुन चेन्नइ सुपर किङ्सले २ सय ५ रन बनाएको थियो ।
मंगलवार, भाद्र १६ २०७७११:४६:५६